नेपाल आइपुग्यो केटीएम ड्यूक; ३० हजार रुपैयामा ड्यूक २०० को बीएस ६ बुकिङ गर्न सकिने – Dainik Sangalo
नेपाल आइपुग्यो केटीएम ड्यूक; ३० हजार रुपैयामा ड्यूक २०० को बीएस ६ बुकिङ गर्न सकिने
September 3, 2020 413
प्रिमियम ब्राण्ड केटिएमको केटीएम ड्यूक २०० को बीएस ६ मोडल नेपाल आइपुगेको छ । नेपालको लागि आधिकारकि वितरक हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले बीएस ६ भर्सनको केटीएम ड्यूक २०० जारी निषेधाज्ञा सकिए पछी कारोबार सुरु हुने जनाएको छ । अहिलेको लागि ग्राहकले ड्यूक २०० बीएस ६ पुल्चोक र नक्सालमा रहेको केटीएमको आधिकारिक शोरुमबाट बुकिङ गर्न सक्ने छन् ।
३० हजार रुपैयामा केटीएम ड्यूक २०० को बीएस ६ बुकिङ गर्न सकिने कम्पनिले जनाएको छ । ग्राहकले कम्पनीको आधिकारीक वेवसाइट मार्फत पनि बुकिङ गर्न सक्ने छन् ।
२०० सिसि सेग्मेन्टमा सबै भन्दा पावरफुल प्रिमियम बाइकमा गनिएको केटीएम ड्यूक २०० बीएस ६ मोडलमा १९९.५ सीसी सिंगल सिलिन्डर, एफआई, लिक्वीड कुल्ड इन्जिन रहेको छ । जसले १०००० आरपीएममा २५ पीएस पावर तथा ८००० आरपीएममा १९.३ एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । जुन नेपालमा उपलब्ध यो सेग्मेन्टको बाइक मध्य सबै भन्दा पावरफुल हो ।
१३.५ लिटरको फ्युल ट्यांक रहेको यस बाइकले ३४ किलोमिटरको माइलेज दिने कम्पनिको दावी छ । त्यस्तै यसमा १५५ एमएमको ग्राउण्ड क्लिएरेन्स छ भने कुल तौल १५९ किलोग्राम रहेको छ । बिएस ४ भन्दा निक्कै आकर्षक स्वरूपमा आएको बिएस ६ मोडलको मुल्य ५ लाख ३९ हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको छ । निषेधाज्ञा अन्त्य भएर यातायात कार्यालय संचालनमा आएपछि मोटरसाइकल बिक्री हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
← नया भर्जनको चर्चित हार्टफोर्ड भीआर’ को दुई मोडल, निषेधाज्ञा खुलेपछि कारोबार सुरु हुने (मूल्य सहित)
Prevकस्तो अचम्मको शरीर, बच्चैमा मस्त तरु’नी देखिने यिनी को हुन् ? भिडियोमा हेर्नुहोस !
Nextकाभ्रेपालन्चोकबाट आयो यस्तो दुख’द खबर ! जेठाजुद्वारा आफ्नै बुहारीको वि’भत्स ह’त्या